ပလပ်စတစ်နဲ့ မိုက်ခရိုဝေဗ့် အကျိုးဆက်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ပလပ်စတစ်နဲ့ မိုက်ခရိုဝေဗ့် အကျိုးဆက်များ
Posted by kai on Mar 3, 2011 in Food, Drink & Recipes, Health & Fitness, Hoax, Know-How, DIY |6comments
ခေါင်းစဉ်အတုိင်းပါပဲ..။ဘာသာပြန်ပြီး ကြည့်သာဖတ်ကြပေတော့နော..။ မရှင်းရင်အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အဘိဓာန်လေး လှန်ကြဦးပေါ့..။
တိုတိုလွယ်လွယ်ပြောရရင်.. မိုက်ခရိုဝေဗ့်နဲ့ ပလပ်စတစ်က ထင်သလောက်ပြသနာမရှ်ိဘူးလို့ပါပဲ..၊ ပစ္စည်းတွေမှာ“Microwave Safe.” ရေးထားရင် စိတ်ချသုံးနိုင်ပါတယ်..။
မရေးထားရင်လည်း.. သာမန်အားဖြင့် ပြသနာမကြီးပါဘူး..တဲ့။ Again, there is no credible scientific evidence to back up the nutritionist’s claims that heating or freezing plastic will leak toxins into the container’s contents.
ပလပ်စတစ်က အပူဖြစ်ဖြစ်..။အအေးဖြစ်ဖြစ်မှာ ကယ်မစ်ကယ် (အဆိပ်ဓါတ်)ထုတ်တယ်ဆိုတာ သိပ္ပံစမ်းသပ်ချက်အထောက်အထား လုံးဝမ၇ှိပါဘူးတဲ့.။
However, some plastic containers – such as those that hold meals from fast-food outlets, or cold food receptacles such as margarine tubs – may not be suitable for microwave use.
ဒါပေမဲ့.. မက်ခ်ဒေါ်နယ်လို ဖတ်စ်ဖုဆိုင်ကထည့်လိုက်တဲ့ ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းတွေတော့ မိုက်ခရိုဝေဗ့်ဖို့ မသင့်တော်ပါဘူးတဲ့.။
အောက်ဆုံးမှာ.. Johns Hopkins Kimmel Cancer Center ကထုတ်တဲ့စာလိုလိုနဲ့.. ခြိမ်းခြောက်စာ ပါပါတယ်.။ အဲဒါတွေကို ယူအက်စ်က အီးမေးလ်တွေထဲ တော်တော်ရောက်လာတယ်.။ ဂျွန်ဟော့ကင်းစင်တာကဆိုတော့ ယုံကြတာပေါ့..။ အဲဒါနဲ့.. အစားအသောက်စားခါနီး မိုက်ခရိုဝေဗ့်နဲ့နွေးရင်တောင် ပလပ်စတစ်ရက်ပ် မအုပ်ရ။ ကလေးနို့ဗူး မနွေးရ၊ ရေခဲသေတ္တာထဲ ပလပ်စတစ်ဗူးနဲ့ရေအအေးမခံရတွေဖြစ်ကုန်တာပါ..။
အဲဒါက အာရွှီးပါလို့..။ Hoax..Hoax
FAQs: Using Plastics in the Microwave –
Johns Hopkins has recently sent this out in their newsletters worth noting… This information is being circulated at Walter Reed Army Medical Center.
Dioxin Carcinogens cause cancer, especially breast cancer. Don’t freeze your plastic water bottles with water as this also releases dioxins in the plastic.
So such things as TV dinners, instant ramen and soups, should be removed from the container and heated in something else. Paper isn’t bad but you don’t know what is in the paper. It’s just safer to use tempered glass, Corning Ware, etc. He said we might remember when some of the fast food restaurants moved away from the foam containers to paper. The dioxin problem is one of the reasons.
တို့ရွာမှာ ထင်းနဲ့ပဲ ချက်တယ်
ကျေးဇူးပါ…….ပလတ်စတစ်တွေနဲ့ အပူ အအေးတွေကြားမှာ စားသုံးသူတွေဒုက္ခ ရောက်နေကြရတာကြာပါ
ပကောဗျာ…..အသီးအနှံတွေမှာလဲ ပိုးသတ်ဆေး ပါနေလို့ ကြောက်နေကြရသေးတယ်မဟုတ်ပါလား…..
လက်တို့ပြီး ..ခုသိထားတာလေးကို ဝေမျှရအုံးမှာပါ…..
ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စိတ်အနှောက်အယှက်များစွာထဲက ..အပူတစ်ခု လျော့သွားရတဲ့အတွက်သူကြီးကို
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့် … တစ်နေ့ကတောင်မှပဲ မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ထဲ ပလပ်စတစ်ဘူး ထည့်နွှေးလိုက်တာ ဘူးကြီးက ပိန်ချုံးပြီး တွန့်သွားတာ လွှင့်ပစ်လိုက်ရတယ် … ဘူးကို … အထဲကဟင်းကိုတော့ စားလိုက်တာပေါ့နော် …